April 2021 – Grab Love Story
သူ့ယောင်္ကျားကိုင်သလို တစ်အုံလုံးကိုင်တာမှဟုတ်တာ နို့ဘေးသားလေးကိုလက်နဲ့ထိရုံပဲဥစ္စာ ဘာဖြစ်လဲ၊ ဒီကောင်ချောလေးကျေနပ်တာကို သူပျော်နေသလိုခံစားရသည်။
အု ဟု ဟု အသက်ရှုကျပ်သဖြင့်မောင်မောင်ကျော်ရဲ့ခါးကကော့တက်လာသည်။ မြတ်ရွှေစင်ကမောင်မောင်ကျော်မျက်နှာပေါ်ဖိထိုင်ထားသည်။ ခြေတွေလက်တွေက ကုတင်မှာ ကြိုးနဲ့တုပ်ခံထားရသဖြင့် မောင်မောင်ကျော်ဘာမှလုပ်၍မရ။ သူ့လီးကို မမြတ်ရွှေစင်က လက်ဖြင့်ဆုပ်ပြီးကစားနေသည်
သို့သေ်ာ ခုနှစ်ချက် ရှစ်ချက်မျှ စောက်ဖုတ်လေးထဲတွင် လီးချောင်းကြီးက ကန့်လန့်လေးဖြတ်လျှက် စောက်စေ့လေးကို ကြိတ်ကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးသွင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရသောအခါ…. “ ပြွတ်…. ဘွတ်…. ပလွတ်….. စွပ်…. ပြွတ်……” “…. အမေ့…. အား….ဟား….. အား…. ပါး….ပါး….
ဦးမင်းနိုင်မှာ မနားတမ်း ဖိလိုးရင်း ခါးအားဖြင့် ကြိတ်မွှေကာ တချက်ချင်း ဆောင့်လိုးပေးပြန်သည်။ တဖြည်းဖြည်း စောက်ရည်ကြည်လေးများ ထွက်လာကာ တဇွိဇွိ တဇွပ်ဇွပ်ဖြင့် လီးအရသာ တွေ့လာရ၏။
သူ့ဟာဟူဖင်ကြားထဲကနေစီးသွားမှာပါ။အခုဟာက ကျွန်တော်ကလီးနဲ့ပြေးပြေးဆောင့် နေတော့ ထမီစကပါ ဖင်ကြားထဲရောက်ရောက်သွားပြီး စောက်ရည်ကြည်တွေက ထမီပေါ်မှာပါလာစိုနေတော့တာပေါ့။မှတ်တိုင်မှာကားရပ်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးလွယ်အိတ်ကို ရှေ့ကိုပြောင်းလွယ်လိုက်ရတာပဲ
ကျမပါးစပ်သာအားနေရင် အားကုန်အော်ဟစ် မိမယ်ထင်တယ် ကျမအပေါက်ကပဲကျဉ်းနေတာလား ကိုမြင့်ဟာကပဲ ကြီးထွားနေတာလားမပြောတတ် စီးကျပ်ကျပ်ပြည့်တင်းတင်းနဲ့ကျမတကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားတာပဲ
“လာ ငစိုး အ​ပေါ်သွားရ​အောင်​ နင်​ငါ့ကို လုပ်​ရမှ​ကျေနပ်​မယ်​ဆိုလည်းမြန်​ မြန်​လုပ်​ပြီးပြန်​​တော့ ဒါမယ့်​ဒီကိစ္စကိုဘယ်​သူ့မှ​လျှောက်​မ​ပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ ​ပေးရမယ်​” “
ကျန်လက်က မမ ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ နဲ့ အစိထိပ်လေးကို ပွတ်ရင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက် အကြိမ်များများ ဆော်ထည့် လိုက်ရာ ကာမအရသာ ပြည့်စုံလွန်းသော မျက်နှာအမူရာမှာ အထင်းသား , မမ(၃) ခါ ပြီးသွားပြီး ခုတင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား လှဲချကာ တစ်ယောက် ပစ္စည်းကို တစ်ယောက်က ပွတ်သပ်ပေးရင်း ခဏ အမောဖြေလိုက်သည်.
အစပိုင်းတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ပေါ်ကနေ ညှောင့်ရင်း ချော့ထည့်ရတာပေါ့။ သူကတော့ ကျွန်တော့်အိပ်ရာခင်းကို အားကုတ်ဆွဲကုပ်ပြီး ကိုင်ထားတယ်။ စီးပိုင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို သူ့ဟာလေးက အထဲကနေ ညှစ်နေတယ်
“အား….အင်း….အီး….“ “အမလေးးးး အားးးး မောင်ရေ အားးးး“ လက်ခလယ်ကို ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်ရင်း မွှေထိုးပေးကာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်သည် “အားးး မောင် အားးးးရှီးးးးးးးးးးးး“ မိုးသန္တာ ဒူးတွေ ပါ တဆက်ဆက် တုန်လာလေသည်